Kylie Jenner ghọrọ onye ntà nke onwe ya billionaire na akụkọ ihe mere eme mgbe ọ dị afọ 21
On ndepụta nke billionaires kachasị ọhụrụ nke Forbes tọhapụrụ, ọ tụrụ ndị mmadụ n'anya ịhụ na Kylie Jenner dị afọ 21 aghọwo onye ntà nke onwe ya onye nwere nde mmadụ na akụkọ ntolite nke nwere ijeri $ 1 nke ihe ntecha ya Kylie. Oge a, Kylie Jenner mebiri onye nchoputa Facebook Mark Zuc ...
Otu esi ehicha akwa etemeete
Nwanyị ga-ehicha ahịhịa nwanyị na-emechi ya oge niile iji gbochie nje bacteria. Yabụ otu esi ehichapu ahịhịa etemeete? E nwere ụzọ abụọ iji ehicha ahịhịa etemeete, otu bụ ịsa ntụ, nke ọzọ bụ ịsa mmiri. Ntụ ntụ / Talcum akọrọ ihicha sachaa ntụ ntụ ntụ na ntụ ntụ unt ...
Enwere ụzọ 4 iji dọta anya anya. Ọ dị mma ịbịaru dịka ụdị anya.
Ebumnuche bụ isi nke eteme bụ iji uru na izere ọghọm, yana gbanwee oke ihu mmadụ. Dịka ọmụmaatụ, etemeete anya, ọ bụ ezie na akụkụ ahụ dum abụghị nnukwu, mana iji agba etemeete dị ọtụtụ. Nwere ike ịdọrọ anya ma mara mma n'anya.
JOYO © Ikike niile echekwabara. Featured ngwaahịa, Sitemap, Egbugbere ọnụ Agba Paịlet, Obere lipstick, Anya Anya ọla edo, Kacha mma ude Eyeshadow, Shimmer Lipstick, Lipstick chọkọleti, Ngwa niile